Zazavavy Andevo Lasa Olomangam-Pirenena Hiditra Hianatra Sekoly Ambony · Global Voices teny Malagasy
Zazavavy Andevo Lasa Olomangam-Pirenena Hiditra Hianatra Sekoly Ambony
Voadika ny 14 Jona 2015 9:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Español, 日本語, English
Pikantsarin'i Shanta Chaudhary, Mpikamban'ny Antenimieram-Panorenana teo aloha, nandritra ny antsafa nifanaovana tamin'ny mpanao gazety Nepali Dil Busan Pathak tamin'ny fandaharana Though Talk ao amin'ny televiziona News 24.
Azo atao filma Bollywood tsara mihitsy — andevo zazavavy mitolona fahantrana, tafiditra tao amin'ny Antenimieram-Panorenan'i Nepal, nanoratra boky nahazo loka, miady amin'ny homamiadana ary reharehan'ny vondrom-piarahamonina misy azy.
Shanta Chaudhary was 8 when her parents sold her for $75 to scrub, cook, sweep 19 hours a day in #Nepal. http://t.co/3PsN2rKvQm #Kamalari
— Heather Marsh (@GeorgieBC) June 5, 2013
Valo taona i Shanta Chaudhary raha namidin'ny ray aman-dreniny $75 izy ho mpiborosy, mpahandro, mpamafa trano 19ora isan'andro tao Nepal.
Mivoaka vaovao indray ankehitriny i Shanta Chaudhary, vehivavy manampanahy tsy voafolaka. Niditra ambaratonga fahavalo tao amin'ny sekolyu iray tao an-toerana izy fa hianatra any amin'ny sekoly ambony. Raha mianatra ao amin'ny ambaratonga fahasivy ny zananilahy ary kilasimandry ambaratonga fahafito any an-drenivohitra Nepaley Kathmandu ny zananivavy, dia nifidy sekolim-panjakana iray ao amin'ny tanàna kely misy azy kosa ramatoa.
Ex-lawmaker Shanta Chaudhary, who headed parliament committee on natural resources for 4 yrs, enrolled in grade 8 pic.twitter.com/WD3kpeMwKD
— Thira L. Bhusal (@ThiraLalBhusal) June 10, 2015
Mpanao lalàna teo aloha Shanta Chaudhary, izay filoham-baomiera parlemantera momba ny otrikarena voajanahary nandritra ny efa-taona, niditra nianatra ambaratonga fahavalo
Niainga tamin'ny maha-Kamlari ka lasa olomangam-pirenena i Chaudhary, mpikatroka sady mpitarika ao amin'ny Antoko Komonista Nepal – Marxista-Leninista Tafaray.
Ny Kamlaris dia zazavavy tanora, avy amin'ny vondrom-piarahamonina indizeny Tharu, ataon'ny mpanankarena miaina any Andrefan'i Nepal ho Andevo.
Na dia voarara ao Nepal aza ny fanandevozana, dia natao hiasa andro aman'alina ireo zazavavy ireo, ao anaty fiainam-pangirifiriana, miaritra fanararaotana ara-nofo sy vono ary mety ho faty amin'ny fomba tsy mazava aza.
Mahazo volakely na tsy mahazo mihitsy aza ny Kamlaris ho setrin'ny fanompoany. Araka ny fanombatombanana sasantsasany, dia mbola mahatratra an'arivony ny zazavavy miasa amin'ny maha-Kamlaris azy any amin'ireny tanàndehibe Nepaley ireny, ka anisan'izany i Kathmandu.
Na dia nampidirin'ny governemanta ho ao anaty fandikandalàna aza ny rafitra Kamlari tamin'ny 2013, dia tsy nanakana ny olona hitazona Kamlaris ao an-tranony izany.
Eto ambany ny tantaran-jazavavy telo izay voavonjy tamin'ny fanandevozana ary mpikatroka ao amin'ny hetsika mitaky ny fanafoanana ny rafitra Kamlari amin'izao fotoana izao:
PHOTOS: From slavery to freedom – Women freed from the #Kamalari slave system in #Nepal. http://t.co/cBkQAvPtP8 pic.twitter.com/H54VPvU6Jh
— Because I am a Girl (@biaagcanada) March 27, 2015
SARIPIKA: Avy amin'ny fanandevozana mankany amin'ny fahafahana – Vehivavy afaka tamin'ny rafi-panandevozana #Kamalari
Tahaka ireo zazavavy Kamlari hafa, niatrika fanararaotana avy amin'ny lehilahy maro i Shanta ary tsy maintsy nanambady hamonjena ny tenany.
Tantara mendrika hovakiana
Kamlari Dekhi Sabhasadsamma (Kamlari lasa mpikamban'ny Antenimieram-Panorenana) dia angano azo tsapain-tanana niaritra fanavakavahana sy fanararaotana amin'ny maha-Kamlari azy ka lasa olona nanome aingam-panahy ny vondrom-piarahamonina misy azy — ohatra velon'ny zazavavy noandevozina ka afaka.
Ao amin'ny boky lazao anay ny zava-drehetra, nofariparitany ny fotoana izay mbola mihalohalo ao aminy ao:
Nandany ny fahazazany amin'ny maha-Kamlari azy tamin'ny trano fito samihafa izy fony valo taona.
Manararaotra azy ny ankamaroan'ireo manantany midadasika. Maro amin'izy ireo no nieritreritra fa tokony hanondraka voly izy na dia avy aza ny orana. Tsy tokony avela haka aina ny [Kamlaris], tokony hiasa hatrany mandritra ny andro rehetra – fomba fisainana lalina ao anatin'ireo manantany midadasika izany.
Tsy maintsy niasa nisolo ny zaobaviny izay bevohoka noho ny fanararaotana ara-nofo nataon'ny lehilahy tao an-trano izay niasany amin'ny maha-Kamlari azy izy. Fomba tamin'izany fotoana izany ny mandefa olona hafa rehefa tsy afa-miasa noho ny aretina na noho ny antony hafa ny Kamlari.
Tao amin'ny trano iray, mpandrora sy mpikapoka azy ny zanakavavin'ny ny manantany iray. Nahafaly azy ny niantso azy hoe “Tharuni”. Nieritreritra izy fa raha misy olona iray afa-manao zavatra hoan'izany Tharuni izany. Nankahala azy ihany koa ny reny sy ny reniben-drazazavavy ary tsy zakan'izy ireo mihitsy izany hoe tsy manao zavatra izay izy na dia iray segondra aza.
Nisy fitsipika hafahafa – tsy maintsy vonona hanaiky ny fanararaotana ny Kamlaris, fa tsy mahazo mitaraina. Na mitsimpom-bary izy na mitondra tavinkena, na mankany an-tsena na manasa lovia – misy hatrany ny fikasana hihoapahefana. Saingy tsy nisy nahomby avokoa izany rehetra izany ary heveriny ho toy ny fahatontosan-javatra lehibe iray izany.
Indray mandeha izy [rehefa lasa depiote] dia nitondra fiara avy any an-tanàna ambanivohitra nisy azy ka nankany amin'ny foibem-paritra ao Ghorahi. Teny an-dalana dia nisy manantany iray nampiasa azy taloha teo am-piandrasana bus — nampandroso azy tao anaty fiara ramatoa. Gaga ranamana nahita ny fiovana — sarotra ho azy ny hanaiky fa ilay efa nataony Kamlari taloha io.
Namoaka ny tamberin'ny tantaram-piainan'i Shanta Chaudhary nosoratan'ny tenany ihany ilay mpianatry ny Kolejy Shreepriya Poudel:
Milaza amiko ny olona fa ilaina ny mianatra ny fiainan'ireo tsy tsara andro teo amin'ny fiainany satria mahatonga anao halala-tanana [feno fisaorana] izany rehefa mahita ny fiainanao ankehitriny ianao. Heveriko ho antom-pitiavan-tena izany saingy nanapa-kevitra ny hampijoro izany aho tamin'ity indray mitoraka ity. Koa ity ny lisitra, nifototra tamin'ny bokin-dRtoa Chaudhary, amin'ireo toe-javatra sasantsasany tsy eritreretin'ny ankamaroan'ny olona saingy tokony hahatonga azy ho feno fisaorana. Angamba izany no hanampy antsika hahita fomba fiainana tsara kokoa.
1. Ny tafontrano tsy mitete ambony lohanao.
2. Mahazo fanafody, na dia paracetamol fotsiny aza.
3. Firenena tsy hanaovan-dalàna fotsiny fa ampiharina.
4. Gazety, radio na televiziona izay miantoka fa tsy misy olona afaka hanadala anao.
5. Tsy voatery handeha dimy andro misesy tsy mihinan-kanina.
6. Ny taratasim-bolanao, raha manana ianao dia zara raha manome anao mihoatra fito dolara rehefa miasa 12 ora isan'andro ianao.
7. Ny fahafahana mamihina sy manoroka ny zanakao rehefa mitomany izy.
8. Fahalalahana mamahana ny zanakao rehefa noana izy.
9. Ny zavamisin'ny tsy nandehanana teny am-pandriana ianao sady tsy nisy na inona na inona taoan-kibo tamin'ny alina.
10. Ny zavamisin'ny tsy niaina ny fiainanao manontolo ianao ao anatin'ny 50 km manodidina ianao.
13. Ny zavamisy fa tsy naolan'ny olona tsy azonao toherina na dia kely azaianao.
14.Ny asanao ahazoanao mihoatra ny 80 cents isan'andro.
18. Ny fitafianao sy ny zavamisy fa manana akanjo mihoatra ny indroa miova amin'izy ireny ianao.
19. Ny fahafahanao mamaky teny.
20. Ny zavamisy fa tsy miandry/hiandry 7-8 taona ianao vao hividy akanjo vaovao hoan'ny zanakao.
Averiko indray, tsy afa-mihambo hahafantatra izay anjara adidin'ny olombelona iray amin'ny iray hafa aho fa miezaka ny halala-tanana araka izay tratra fa tahaka ny hevitra tsara izany. Raha tsy mahatonga anao handinika indray ny fiheveranao momba ny harenanao sy tombontsoanao manokana io lisitra io, dia zavatra hafa no hanao izany.
Ankoatra ny tolony ho amin'ny zon'ny Kamlaris sy ny vondrom-piarahamonina misy azy, dia miady amin'ny homamiadana ihany koa i Chaudhary tao anatin'ny efataona farany.
Shanta Chaudhary's personal/political struggle a great inspiration! Great to see her fighting spirit facing cancer. http://t.co/D1f9jmVx6h
— Chaukath (@ChaukathNepal) November 4, 2014
Manome aingam-panahy be dia be tokoa ny tolona manokana sy ara-politikan'i Shanta Chaudary! Mahafinaritra ny mahita ny fikirizany manoloana ny homamiadana.
Ary amin'ny fidirany sekoly ambony, dia nanavao ny adiny amin'ny fanavakavahana sy ny fanararaotana indray izy.
1 andro izayBangladesh
Miteraka tsikera ny fahalalahana bebe nomen'ny manampahefana misahana ny tontolo iainana ao Bangladesh ho an'ny sehatrasan'ny fandravana sambo
6 andro izayNepal
2 herinandro izayBangladesh